Bloggers Of Bloggers: တစ်မောင်တည်း ရှိတယ်နော် ဟွန့် 
Posted by ပိုးတီ Labels: မယ်လိုဒီမောင်
ဒီအကြောင်း ပြောချင်နေတာ ကြာလှပေါ့။ ရေးဖို့ ရာ ခုမှ အခွင့်သာတော့ ခုမှပဲ ဖတ်ရှုကြတော့ဗျို့ ။
လူ သိန်း သန်းနဲ့ချီပြီး အသုံးပြုနေကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် နာမည်ကြီး Facebook လိုဆိုဒ်မျိုးမှာ မယ်လိုဒီမောင် အမည်နဲ့နောက်တစ်ယောက် ပေါ်လာလို့မမီ (ခေါ်) မယ်လိုဒီမောင် က သူ့ ကို လိုက်တုရမလား ဆိုပြီး နှာကောက်သွားတာ အွန်လိုင်းမှ အပြီးတိုင် အနားယူပါတယ် တဲ့။ မယ်လိုဒီမောင် တစ်မောင် တည်း ရှိတယ်ဟေ့ လို့သူ့ ခမျာ ကြုံးဝါးချင်နေရှာတာ၊ နောက်တစ်ယောက်လည်း ပေါ်လာရော နှစ်မောင် အဖြစ်မခံနိုင်လို့အမြီးကုပ် သွားလေရဲ့။
မေးစရာ မေးခွန်းလေးတွေက ပေါ်လာတယ်။ နာမည်တူတာလေး တစ်ခုကြောင့် မမီ (ခေါ်) မယ်လိုဒီမောင် ကို လိုက်တုတယ် ပြောရအောင်၊ မမီ (ခေါ်) မယ်လိုဒီမောင် က ဘာမို့ လို့ လဲ? စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ရောက်နေလို့ဖင်ခေါင်း ကျယ်သွားတာလား? နေဘုန်းလတ် သူငယ်ချင်း၊ မူလလက်ဟောင်း မမီ? နေဘုန်းလတ် သာရှိရင် မူလလက်ဟောင်း မမီ ကို နားရင်းအုပ်အုပ်ပြီး တရားချပြီးလောက်ပြီ။ သိပ်ပြီး မြင့်ပြနေရင် ပြန်ကျရင် လူကျ မကျပဲ ဘာကျ ကျတတ်လဲ ဆိုတာတော့ .....။
ဒါနဲ့အားလုံးကို ဒီစာမျက်နှာပေါ်ကနေ တရားဝင် သတိပေးချင်တယ်။ ပိုးတီ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ Register လုပ်ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ နောက်ထပ် ပိုးတီ တစ်ယောက် တွေ့ ရင် မူလလက်ဟောင်း ပိုးတီ က မမီ လို ပင်စင်မယူဘူး။ တွေ့ ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်းပဲ!!! (ဟဲဟဲ :P)
ဆရာကြီး (ခေတ္တ ကျွန်းပေါ် ) said...
စိတ်ကောင်းကောင်းထားပါအေ။ ညည်းကလဲ။ သူ့ခဗျာ နှစ်ယောက်မဖြစ်ချင်လို့နေမှာပေါ့
သောက်ပေါ.....ဘာမှလဲ.၊ မသိပဲ လျှောက်ရေးနေတယ်။ မနေ့တစ်နေ့ကမှ စရေးပြီး၊ မရေးတတ်ပဲ.. လူစွာမလုပ်နဲ့ ကွ
မင်းမို့မရှက်တယ်.....သောက်ပေါတွေ ....shit ,,,,oIo
chan pion said...